SPORTS MYANMAR - Page 861 of 864 -
ဒီရာသီ ဖျက်သိမ်းလိုက်မယ် ဆိုရင် တရားစွဲခံရမယ့် အကြောင်းအရင်းတွေ များလွန်းနေလို့ ၊ ပရိသတ်မပါပဲ ကစားရင်း အပြီးသတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားဖွယ် ရှိနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်
ကော်ရိုနာ ဗိုင်းရပ် ပြသနာကြောင့် အင်္ဂလန်မှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေ အားလုံးကို ရပ်တန့် ပစ်လိုက်ရပြီး နောက်ပိုင်း ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုး နဲ့ အဆုံးသတ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ပရိသတ်တွေ အကြားမှာရော ၊ ပြိုင်ပွဲ တာဝန်ရှိသူတွေ အကြားမှာပါ အပြောများလာတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကလပ် အသင်း …
ဆိုးလ်ရှားကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ ဘာတွေ ပိုမို ထူးကဲ ကောင်းမွန် လာခဲ့ကြ သလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟ လိုက်တဲ့ အဲရစ် ဘိုင်လီ
ဒဏ်ရာ ပြသနာ တွေက ပြန်လည် သက်သာ ကောင်းမွန် လာခဲ့မှု နဲ့ အတူ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် ခြေစွမ်းကောင်း တွေကို ပြန်လည် ပြသ နေခဲ့တဲ့ ဗဟို ခံစစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ အဲရစ် ဘိုင်လီ က လက်ရှိ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ဟာ ကစားသမား …
ချယ်လ်ဆီး ဂန္တဝင် တဦး ကို လေးစား အားကျရကြောင်း ဖွင့်ဟလာတဲ့ #တိုမိုရီ
ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ကစားသမားသစ် တဦးတယောက် မှ ခေါ်ယူခွင့် မရှိပဲ ရာသီသစ် ကို စတင်ခဲ့ရတာကြောင့် အကယ်ဒမီ နဲ့ အငှားမှ ပြန်လာတဲ့ လူငယ် ကစားသမား တွေကို စီနီယာ အသင်း မှာ နေရာ ပေးထားရပါတယ် ။ ဒီလို အခြေအနေ …
အာဆင်နယ် အသင်းအတွက် ပေးဆပ် ကစားလိုစိတ် မရှိတဲ့သူတွေကို ရောင်းထုတ်ဖို့ အာတီတာ ကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ကီဗင်ကမ်းဘဲလ်
အာဆင်နယ် အသင်း တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ကီဗင်ကမ်းဘဲလ် က နည်းပြ လေးယောက် ပြောင်းသွားသည့်တိုင်အောင် အသင်းမှာ ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့် မရ ဖြစ်နေတဲ့ မိတ်လန်နိုင်းလ်စ် လို ကစားသမားမျိုးကို အသင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့် ပြုလိုက် သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း အကြံဉာဏ် ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အသက် ၂၂ နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ …
လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ပြီး အာဆင်နယ် အသင်းမှာပဲ ဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အိုဒရစ်ကိုးလ်
အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ အားကစား ဆေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အိုဒရစ်ကိုးလ် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ဘက် လီဗာပူး အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆန် ပယ်ချ လိုက်ပြီး လန်ဒန်မှာပဲ ဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ လီဗာပူး အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာ ကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ …
အစ်ဂ်ဟာလိုကို အပြီးသတ် ခေါ်ယူ စေလိုနေ ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက် များနေကြပြီလဲ ?
မန်ချက်စတာ ညနေခင်း သတင်း မှ ကောက်ခံ ခဲ့တဲ့ မဲပေး ရွေးချယ်မှု မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ပရိသတ် အများစု ဟာ လက်ရှိ အငှား လာရောက် ကစား နေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး အစ်ဂ်ဟာလို ကို အငှား စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး သွားတဲ့ အခါ …
Sancho Plan B ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ . . . . . မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒေါ့မွန် တောင်ပံ ကစား သမားလေး ဂျေဒန် ဆန်ချို ကို လာမယ့် အပြောင်း အရွှေ့ ရဲ့ နံပါတ် ၁ ပစ်မှတ် အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါတယ် ။ ဆန်ချို ဟာ ယူနိုက်တက် လိုအပ် နေတဲ့ ညာတောင်ပံ ကို …
အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေခဲ့ရခြင်း ၊ ကလေး မျက်နှာ နဲ့ လူသတ်သမား အဖြစ် ဆက်လက် ရှိနေသေးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ် တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား က ယူနိုက်တက် နည်းပြ တာဝန် ကို ထမ်းဆောင် နေစဉ် ကာလ အတွင်း သူ့ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း တွေဟာ ရိုလာကိုစတာ လို အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ များခဲ့ ပေမယ့် သူ ကိုယ်တိုင် ကတော့ …